मानिसलाई यौनका विषयमा धेरै चासो रहने गर्दछ । आफ्नो यौन चाहाना पूरा गर्नका लागि मानिसले अनेक उपाय सोच्ने गरेको छ । धेरैले हस्तमैथुनबाट आफ्नो यौन चाहना पूरा गर्ने गरेका छन् । हातले अथवा केही साधन प्रयोग गरेर, यौनाङ्ग चलाएर, हल्लाएर वा खेलाएर यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने विधि नै हस्तमैथुन हो । हस्तमैथुन यौन आनन्द प्राप्त गर्ने अति नै सुरक्षित...
जाडोमा हात फुट्नबाट कसरी जोगाउने
– फुटेको हातलाई चाँडै सुन्दर बनाउँन नियमित मोश्चराइजर लगाउँनुपर्छ । यसबाट हातको सुख्खापन या फुटेको छाला चाँडै ठिक हुन्छ । – हातमा रसायनयुक्त वस्तुको साटो प्राकृतिक उत्पादनको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । – राती सुत्नुअघि कुनै राम्रो गुणस्तरको मोश्चराइजर लगाउँनुस् । दिनमा कम्तीमा पनि चारपटक मोश्चराइज क्रिम प्रयोग...
शरीर कसरी फिट एण्ड फाइन राख्ने ?
स्लिम र आकर्षक हुन खाना खान छोड्नुपर्छ भन्ने होइन । केही कुरामा ध्यान दिए शरीरलाई ‘फिट एन्ड फाइन’ राख्न सकिन्छ । नियमित व्यायाम गर्ने : फिट्नेस भन्नेबित्तिकै सामान्यतयाः हामी सबैले शारीरिक बनावट तन्दुरुस्त राख्ने भन्ने बुझ्छौँ । तर, शारीरिक व्यायामले मानसिक तथा अत्मविश्वासको तह पनि बढाउँछ । व्यायाम शारीरिक सुगठनका लागि मात्र...
केराको फूलको अनेक फाइदा !
केराको फूल खाँदा धेरै रोग हटाउन सकिन्छ । मधुमेह, डिप्रेसन एनिमियाबाट बचाउन यसले मद्दत गर्छ । त्यसलै केराको फूललाई दैनिक खानामा कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ । मधुमेय रोगीको लागि फाइदा : एउटा अध्ययन अनुसार डायबिटिज लागेका मानिसको इन्सुलिन तह केराको फूलबाट घटाउन सकिन्छ । डिप्रेसन कम गर्छ : यस फुलमा धेरै मात्रामा...
सेक्स गर्नुस् तर, सावधानी अपनाएर । सेक्स कहिले र कसरी गर्ने, महिनावारीमा सेक्स गर्ने वा नगर्ने । गर्ने हो भने कहिले गर्ने ताकि गर्भ नरहोस् । यस्ता केही प्रश्नबाट अधिकांश युवायुवतीको दिमागमा चलिरहेको हुन्छ । सेक्सलाई लिएर सबैभन्दा बढी जिज्ञासा महिनावारीको समयमा हुन्छ । एक आम धारणा छ कि महिनावारी भएको १४ देखि १६ दिनको बिचमा यदि तपाईँ सेक्स...
मस्तिष्कका लागि व्यायाम
मानिसको जीवनका लागि व्यायाम महत्वपूर्ण मानिन्छ । महत्वपूर्ण यस अर्थमा की व्यायामले शरीर स्वस्थ्य राख्नका लागि मात्र सघाउ पुर्याउदैन । मस्तिष्कका लागि पनि व्यायाम महत्वपूर्ण मानिन्छ । मस्तिष्कका लागि एरोबिक व्यायाम सबैभन्दा लाभदायक मानिएको छ । स्मरण शक्ति क्षीण हुन नदिन र अल्जाइमर्स रोगको जोखिम न्यून गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय...
मुख धुँदा भुलेर पनि नगर्नुस यी गल्तिहरु
एजेन्सी/ हामी सबैको बानि बिहान उठेपछी सबै भन्दा पहिला मुख धुँने गरिन्छ । स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि पनि हामीले दैनिक रुपमा मुख धुने काम गर्नैपर्छ । यसरी दैनिक रुपमा पटक पटक गरिने यो काममा पनि हामीले धेरै गल्ती गरिरहेका हुन्छौ । यसरी मुख धुँदा आमी कसैले पनि धेरै कुराहरु याद नै गरिरहेका हुँदैनौ । जसको परिणाम स्वरुप विभिन्न स्वास्थ्य...
यी हुन् बाझोपनको उपचार
काठमाडौं बाँझोपनको उपचारका लागि दम्पती नै चिकित्सक समक्ष जाँदा राम्रो मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा जति छिटो चाँडो गएर उपचार गराउनुपर्छ । औषधि उपचारबाट सन्तान प्राप्त नभएका अवस्थामा आईभीएफ ९टेस्टट्युब बेबी० प्रविधिको सेवा पनि लिन सकिन्छ । महिलाहरूको अण्डवाहिनी नली बन्द भई बाँझोपन भएको अवस्थामा नलीको अप्रेसन गरी खोल्ने प्रयास भएको...